- महाधिवेशनको मुखमा कारबाही !
महाधिवेशनको मुखमा कारबाही !
काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा महाधिवेशनकेन्द्रित विवादले झगडा बढाउँदै लगेको छ । एकपछि अर्को गर्दै सुरु भएको विवादको शृंखलामा पछिल्लोपटक निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरु बाझिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने संस्थापनइतरपक्षीय नेताहरु नरम छन् ।
महाधिवेशनको मुखमा संस्थापन र इतरपक्षका आ–आफ्नै रणनीतिक योजनासमेत यसमा जोडिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिले अनुशासन उल्लंघनको बहानामा इतरपक्षका नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको डन्डा चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
। महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल बनाउने नाममा पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाही अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उसले विरोध जनाएको छ ।
अहिले कारबाहीमा पर्नेको सूचीमा तनहुँका गोविन्दराज जोशी र कैलालीका पुष्करनाथ ओझा अग्रपंक्तिमा छन् । भीष्मराज आङदम्बे संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिले जोशी र ओझासहित चार जनामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई पाँच वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै गृहजिल्ला तनहुँका नेता जोशीसँगै कैलालीका पुष्कर ओझालगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । ओझामाथि सभापति देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप छ । जोशी भने पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवार बनेका थिए । भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्दै पौडेलले उजुरी दिएपछि निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । पार्टीको विधानमा बागी उम्मेदवार बन्नेलाई स्वतः कारबाही हुने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर मा छ ।
प्रकाशित मितिः आइतबार, चैत २, ०७:५२